यत्ति गर्नसके देश सुध्रिन्छ
देश भ्रष्टाचारले बिग्रिएकोमा शंका छैन । भ्रष्टाचारी को हो ? कर्मचारी हुन् कि राजनीतिक नेता ? यी दुई तत्वको मिलोमतोबिना कुनै पनि दलालले टाउको उठाउनै सक्दैन, भ्रष्टाचारको जरो भनेको यिनै दुई तह हुन् । यी दुई तह सुधार्न जसले सक्छ, उसले देश निर्माण गर्छ, यसमा पनि शंका छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुशासन र समृद्धिको सपना देखाएका छन् । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउँछु बनाउँछु भनेर कम्मर कसेका छन् । उनलाई असफल पार्न यति ठूलो प्रयत्न भइरहेको छ कि यसमा नेकपाकै नेता, कार्यकर्ताको ठूलै झुण्ड लागिपरेका छन् । बलात्कार, हत्या, अराजकता, कमिशनको खेलोमा जो जो मुछिएका छन्, त्यसमा नेकपा पनि अछुतो छैन । घर नसुधारी, नबढारी समाज, देश सफा गर्न सकिन्न । घरमूली पनि केपी ओली नै हुन्, देशमूली पनि केपी ओली नै हुन्, उनले पार्टी अध्यक्षता ग्रहण गर्दा भनेकै हुन्– मेरो बाँकी जीवन देश र जनताका लागि काम गरेर बिताउँछु । मदन नगरमा गरेको त्यो कबुल र नाकावन्दीका बेलामा देखाएको देशभक्तिपूर्ण अडानकै कारण केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् र अव प्रम ओलीले जीवनमा मलामी बढाउने र जनताको आँखामा बस्ने बेला आयो । यसका लागि इच्छाशक्ति र दह्रो ढाडको हाड देखाउने बेला भयो । आफ्नो र पराई भनेर छुट्याउने होइन, जो होस्, अपराधकर्म गरेको छ भने उसलाई पाता फर्काउन सक्नुमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सफलता र असफलता जोडिन पुगेको देखिन्छ ।
सुडान घोटाला काण्डले देशकै बेइजत भयो । यो काण्ड सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित थियो । एनसेल काण्डले देशले पाउने पर्ने लाभकर पाउन सकेन, यो काण्डले नेपालको अर्थतन्त्रमा कतिसम्मका भ्रष्ट भाइरसहरु सलबलाएका रहेछन् भन्ने देखिन्छ । एउटाले नाफा कमाएर कम्पनी बेचेर गयो, किन्ने एक्जियटाले कमाउँदै लगिरहेकै छ र उसले पनि फेरि यो कम्पनी बेच्ने तरखर गरिरहेको छ । फेरि पनि नेपालले पाउनैपर्ने लाभकर नतिरी जानसक्छ । किनकि अर्थका कर्मचारीहरु एनसेलसँग मिलोमतो गरेर कमाउन खान पल्केका छन् ।
वाइडबडी दुई जहाज खरिद भयो । ४ अर्व ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको कुरा संसदीय छानबिनबाटै प्रष्ट भइसक्यो । महालेखाले सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचिएको ठहर गरेर रिपोर्ट दिइसक्दा पनि कसैले कानमा तेल हालेनन् । सरकारले संसदीय रिपोर्टमाथि ४५ दिनको म्याद दिएर थप अनुसन्धान गराइरहेको छ । बल्ल बल्ल किनेको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक दुईथान वाइडबडी जहाज, त्यसमा यति ठूलो भ्रष्टाचार । यो भ्रष्टाचारमा ठूलै नेताहरु र पार्टीहरु जोडिएका चर्चा परिचर्चाहरु जारी छन् । जेहोस्, ओली सरकारले दुधपानी छुट्याउनु पर्छ । र, हालै नेपालिक्सले स्वीस वैंकमा कालोधन थुपार्नेहरुको सूची नै सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदमै सकेसम्म छानबिन गर्ने बचन दिएका छन् ।
जोसुकैको अनुहार देखियोस्, हिम्मतका साथ यी केही मुद्दाहरु जो जनचासोको विषयमा रहेका छन्, जनचासोमा ध्यान दिएर र जनताको कुरा सुनेर शासन गर्ने हो भने ओली सरकार जनताको सरकार साबित हुनसक्छ ।